Akhriso Qodobadii Laga Soo Saarey Shirkii Nabadeyta Beelahii Ku Dagaalmay Koonfurta Gobalka Sool Ee Jig Jiga Gogoshiisu Taalay
Iyadoo 20 kii Maalmood ee ugu danbeeyey magaalada Jig Jiga ay dawlad deegaanka Soomaalida ay ka waday heshiisiinta iyo soo afjarida shaqaaqo beeleed u dhaxeeyey laba beelood oo colaadoodu daba dheeraatay khasaare badanna ay ka dhaliyey ayaa waxa la soo gebo gebeeyey shirkaasi , Shirkan oo ay dawlad deegaanku u xilsaartay gudi ka kooban 25 […]
Maxamed Cabdi Afey wakiilka Hay’adda Qaxootiga Qaramada Midoobe u qaabilsan Geeska Afrika oo ku sugan Magaalada Jigjiga ayaa kulan gaar ah la qaatay Odoyaasha Magaalada iyo mas’uuliyiin katirsan Dowlad Deegaanka. Waxyaabaha uu kala hadlay waxaa kamid ahaa sidii dib u dajin loogu sameyn lahaa dadkii ka bakaracay Colaadda dhexmartay Soomaalida iyo Oromada iyo gurmad u […]
Madaweynaha DDS oo tababar u sooxidhay ciidaamada DDS.
Madaxweyne mustaf ayaa tababar u soo xidhay qaar ka mid ah saraakiisha dds oo in mudda ah tabbar uga socday Jigjiga ciidanka ayaa la barayay xuquuq insaanka iyo sidii ay shacabka ula dhaqmi mahayeen si anshaxa wnaaagsan iyadoo laga soo kala Xulay ciidanka booliska iyo liyuu booliska iyagoo lagu barayay khalaqada wanaagsan iyo la […]
MUUQAAL:-Madaxweyne mustaf muxumed cagjar Oo Khudbad U Jeediyay Shacabka Godeey
Labada Madaxweyne DDS iyo oromia ayaa heshiis ku kala saxeexday Addis abeba.
Kulan maalin qaaaday oo ay labada Madaxweyne ku yeesheen xarunta dalka ee addis abeba ayay kula saxeexdeen heshiis hordhac lagu soo afjarayo isku dhacyadiii soomaalida iyo oromada oo marar badan soo noqnoqday Inkastoo Dhawr Kii bilood ee u danbeeyay hoose u dhac badan laga dareemayay isku dhaca soomaalida iyo oromada ayaa waxaa Hada dib uga […]
Sawiro tababar u socda ciidanka booliska DDS.
Tobobar kor loogu qaadayo garaadka aqooneed iyo mida siyaasadeed ayaa uuga socda saraakiisha ciidamada booliska deegaanka xarunta tobobarada booliska dds. Mudada uu tobobarkani usocdo saraakiisha ayaa ay baran doonaan casharo ay kamid yihiin 1=Sooyaalkii taariikhda itoobiya kalintay ku lahayd soomaalidu isbadaladasi iyo sidii wax looga baranlaha wixi soo dhacay 2=Barashada dastuurka dalka iyo Kan deegaanka […]
Warar goos-goos ah oo ku saabsan dalka itoobiya
(1) Golaha fadareeshinka dawlada itoobiya ayaa gudi madax banaan usaaray xal u helida khilaafka kusaabsan arimaha “Isirka/ ya maaninat diyaaqee” gaar ahaan arinta Raaya iyo Wal-qayt ee deegaanka Tigreega. Afhayeenka golaha fadaraalka marwo Kayriya Ibrahim oomaanta uwaramaysay TV ga qaranka ee EBC ayaa sheegtay in xubnaha gudigan madaxa banaan laga soo kala xulay deeganada Oromia […]
Madaxweyne mustafe oo qaabilay hooyo dhibaato kasoogaadhay jeel ogaadeen.
Madaxweyne Mustafe muxumed cumer oo madaxtooyada ku qaabilay hooyo ay dhibaato kasoogaadhay xadhigii jeel ogadeen ku curyaantay iyadoo madaxweynuhu amar ku bixiyay in baasboor iyo sharci Loo sameeyo si isbitaalada dibada loogu qaado. Jeel ogadeen ayaa waxuu ka Mid ahaa jeelashii ugu tacadiyada badanaa caalamka iyadoo qaar ka Mid ah maxaabiistii ku xadhnay […]
MUUQAAL:- Madaxweynaha Dowlad deeganka ka Hadlaya Rabshado Ka Dhacay Jigjiga
Haweeney ayaa markii u horeysay Madaxweyne ka noqotay dalka Itoobiya, kaddib markii uu is casilay Madaxweynihii dalka Itoobiya Mulatu Tashome. Fadhi ay yeesheen Labada Gole ee dalka Itoobiya ayaa Sahlework Zewdie loogu doortay inay noqoto Madaxweyne. Sahlework Zewdie waa 68 jir, muddo ka soo shaqeeynay Qaramada Midoobey, waxay markii u dambeeyay aheyd Kaaliyaha Xoghayaha Guud […]